အကူအညီနဲ့အကောင့်လိုအပ်သောစက်ရောင်းချခြင်းကဘာလဲ? အခါအဘယ်သူပြင်ဆင်? | ငါကားရောင်း အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
အကူအညီနဲ့အကောင့်လိုအပ်သောစက်ရောင်းချခြင်းကဘာလဲ? အခါအဘယ်သူပြင်ဆင်? ငါကားရောင်းတော့
တစ်ဦး DCT (ရောင်းချရန်၏စာချုပ်) ကိုလက်မှတ်ထိုးရန်လုံလောက်, သူတို့ကျယ်ပြန့် Poshukayte tyrneta အတွက်ပုံစံများကိုတစ်တွေအများကြီးရှိသည် !! !
DKP အရောင်းအဝယ်များ၏အခွန်ပမာဏကိုအတည်ပြုပေးရန် provednnoy ငွေပေးငွေယူပြီးနောက်နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာဝယ်သောသူထံမှ vazniklo မေးခွန်းများကို shtoby, ရောင်းသူစရာမလိုပေ!
သူတို့ကမင်းကိုပိုက်ဆံပေးရင်မင်းကစာရွက်စာတမ်းတွေပေးတယ်။ များသောအားဖြင့် ၀ ယ်သူကငွေပေးချေသည်။ ကားစျေးကွက်တွင် MREO သည်များသောအားဖြင့်“ ကားပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ခြင်း” ဆိုင်းဘုတ်များအများအားဖြင့်အလေးချိန်ရှိသည်။
ရည်ညွှန်းတန်ဖိုးကိုများသောအားဖြင့် (အစီအစဉ်ဖြင့်ဖြစ်စေ) ကြမ်းပြင်၌ဝေဖန်နေသည်
မူရင်းသဘောအရကားတစ်စီးကိုပြန်လည်မှတ်ပုံတင်သောအခါရောင်းသူနှင့် ၀ ယ်သူနှစ် ဦး စလုံးရှိနေလျှင်အရောင်းအ ၀ ယ်ပြီးစီးရန်လက်ဖြင့်ရေးထားသောစာချုပ်သည်လုံလောက်ပါသည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တစ် ဦး ကိုကိုးကားအကောင့်တစ်ခုသို့မဟုတ် notary အားဖြင့်ရေးဆွဲစာချုပ်ဖြစ်စေလိုအပ်သည်။
သငျသညျကားရောင်းချသည့်အခါသငျသညျ uchta နှင့်အတူအီး snimaesh နှင့်ဖြစ်ပါသည်ပြီးနောက်သင်ပိုက်ဆံ poluchaesh နှငျ့သငျအခမဲ့ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဒီလက်မှတ်များ၏ဝယ်ကိုယ့်ကိုကိုယ်အာမခံနှင့် (နှစ်ပတ်အတွင်း pomoymu) အတွင်းရှိပါဘူးဝယ်ယူခဲ့သူတဦးတည်းအပေါ်တူညီတဲ့လက်မှတ်-UHP ထုတ်ပေးအပေါ်အီးကိုထည့်လေ့မရှိ ucht ,,,
တဖန်သင်တို့မှတ်ပုံတင်ရန်လက်မှတ်အကောင့်မလိုအပ်ပါဘူး။ အဆိုပါကားကိုရောင်းဖို့ဖောက်သည်များနှင့်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူမည်သည့်ရုံးကားကိုမှတ်ပုံတင် (နေရာတိုင်း, ကားစျေးကွက်မှာယာဉ်ထိန်းရဲမှာ, ဒါကြောင့်ပေါ်မှာ။ ဃ), ထံသို့ လာ. , ထို့နောက်သငျသညျမှတျပုံတငျထံမှငှားရမ်းထားသောကားတစ်စီး။ သင့်ရဲ့ဖောက်သည်မှတ်သို့ကိုက်ညီ, သင်စာချုပ်ပေးလက်။ နှင့်ထိုရရှိသောဆိပ်ကမ်းဆီနှင့်အတူဝယ်ကတ်များသည်၎င်း၏ SAI နှင့်ရှိတဖန်သူ၏နာမ၌မှတ်ပုံတင်ထားသောကားကိုထည့်လေ့မရှိ။
UHP ဝယ်ထားဖို့လိုကူညီပါ! ( ... ကားများဝယ်ယူအတည်ပြု ucht အပေါ်ကား setting သောအခါဒါ)
သငျသညျ uchta နှင့်အတူကားများကိုဖယ်ရှားပြီးနောက်ထုတ်ပေးနှင့်ဝယ်တွေ့ရှိခဲ့ ...
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ-item ကိုများသောအားဖြင့်ထက်ဝက်ပေးဆောင် (သို့သော်စာချုပ်အဖြစ် .. )
သငျသညျပေးဆောင်နေကြ ie ။ သူမသည်ကားများ၏ဥပဒေရေးရာလွှဲပြောင်းအတည်ပြုပေးရန်လိုအပ်
ကိုးကားစရာကားများရောင်းချခြင်းအတွက်ဥပဒေရေးရာ entity (ဥပမာကားတစ်စီးအရောင်း) အသုံးပြုပုံကို လုပ်. , SAI အတွက်ကားတစ်စီးမှတ်ပုံတင်များအတွက်ဝယ်အားပေးပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ MPE ပင်စင်ရန်ပုံငွေမှအခွန်ပေးဆောင် မှလွဲ. အကူအညီအကောင့် uakazannoy ပမာဏကနေ။
ရောင်းချခြင်းများအကူအညီအကောင့်သို့မဟုတ်စာချုပ် TC (DCT) တစ်ဦးမော်တော်ယာဉ်များ၏ဝယ်ယူအတည်ပြုခြင်းနှင့်ယာဉ်ထိန်းရဲနှင့်အတူ၎င်း၏မှတ်ပုံတင် setting များအတွက်အခြေခံအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများအကောင့်လှုပ်ရှားမှု၏ဤအမျိုးအစားများအတွက်လိုင်စင်ရကုမ္ပဏီဖွင့်ဆွဲ, ဒါပေမယ့်ဖန်တီးပိုင်ဆိုင်နိုင်သည့်ယခုအများကြီးပို raspostraneny DCT ။ ကမူအရ, အတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့တိကျမ်းစာ၌လာသည်ပုံစံလိုအပ်ပါတယ်ဘယ်သူမျှမကသက်သေခံရှေ့နေထုပ်ပိုးပြီး
ဤစာရွက်စာတမ်း notarized ရောင်းချမှု၏စာချုပ်, အစားထိုး။
Posted in, Auto-အရောင်းအ Making
64 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,340 စက္ကန့်ကျော် Generate ။